China èbè akpa T-S8060 rụpụta na Factory | TIGERNU
Sbè akpa T-S8060
TIGERNU mgbochi ohi èbè akpa
Ihe: Nke a èbè akpa iji splashproof & ọkọ-eguzogide ọgwụ Oxford dị ka isi ihe onwunwe, 230D polyester dị ka lining, nke na-inogide na mma na eco-enyi na enyi. Zippers dị mma ma na-enweghị mmiri, dị mfe zipa na unzipper, gbochie ihe gị ịmị mmiri mgbe mmiri na-ezo.
Ike: The mgbochi ohi èbè akpa size bụ 25 * 12 * 42cm (L * W * H), nwere ike dabara maka 9.7 ″ iPad. O nwere ikike buru ibu na nnukwu akpa 3. Isi ogige zuru oke maka mkpa gị kwa ụbọchị, ekwentị, ụlọ akụ ike, ntị ntị, nche anwụ, obere akpa, akwụkwọ ndetu na ihe ndị ọzọ. Akpa azụ azụ nwere ike ijide gị iPad nke na-enweghị ihe ọ bụla. Akpa ihu bụ maka mfe ịnweta ihe ndị ị na-ejikarị eme ihe
Atụmatụ: Enwere oghere ntị, na-enyere gị aka ịnụ ụtọ egwu mgbe ị na-anọghị ọsọ na-agba ọsọ ma ọ bụ ịgba ịnyịnya ígwè. A na-edozi eriri maka ogologo na aka ekpe na n'akụkụ aka nri. Onye na-ejide kaadị na akpa iko na eriri ka ị nwee ike ịnweta mkpa gị. Mkpọchi akpa n'akpa uwe na-enweghị mmiri na-egosipụta, na-eme ka ị hụkwuo mgbe ị na-emega ahụ n'abalị.
Ọ bụ ezigbo nhọrọ èbè akpa maka imega ahụ, egwuregwu, jogging, na-agba ọsọ, maka ụmụ akwụkwọ, ndị ikom, ndị inyom na-arụ ọrụ na ndụ kwa ụbọchị.
Brand aha: TIGERNU
Nọmba nlereanya T-S8060
Ụdị: Akpa èbè
Agba: Nwa ntụ ntụ, Grey
Mbukota: 70 PC / ctn
Nha: 42 * 25 * 12cm
Ụdị: Oge ezumike
Dabara na iPad size: 7.9 sentimita asatọ
Ihe: Splashproof & ọkọ 300D Cationic Oxford
Akara: Ihe mkpuchi
Ojiji: Ndụ Kwa .bọchị
Nke gara aga: Sbè akpa T-S8061
Osote: Bè akpa T-S8050TPU
Crossmụaka Crossbody akpa
Ahaziri Crossbody akpa
Jirinụ akpa Crossbody akpa
Akpa uwe tigernu
Sbè akpa T-S8061
Bè akpa T-S8050TPU
Crossbody akpa T-S8098
Bè akpa T-S8085
Obodo Aiqun, Shanqian Rd, obodo Xinyang, Huadu Shiling, Guangzhou, China
P ICP 备 12042311
Tigernu ọrụ skype
Ọrụ Tigernu Alibaba